Xaaladda Balcad oo maantay caadi kusoo noqotay, iyo ciidamadii dawladda oo fariisin ka samaystay gudaha iyo duleedka degmadaasi. – Radio Daljir
Juunyo 27, 2012 4:14 b 0
Balcad, June, 27 – Waxaa guud ahaanba maantay dagan xaaladda degmada Balcad ee gobolka Shabeellada dhexe, xilli wararku ay tilmaamayaan in habeenkii xalay ahaa magaaladaasi ay gashay bandaw iskeed ah sida uu warbaahinta u xaqiijiyay Cismaan Maxamed Maxamuud (Xaadoole) oo ah guddoomiyaha degmada Balcad ee maamulka gobolka Shabeellada dhexe.
Gudaha degmada Balcad waxaa maantay dib ugu soo laabtay qoysas-badan oo maalintii shalay ahayd ka barakacay halkaasi, waxaana caadi maantay kusoo noqday ganacsigii magaalada oo shalay albaabada la isugu dhuftay.
Wararka ay idaacadda Daljir ka helayso degmada Balcad ayaa sidoo kale ku waramaya in maantay ciidankii shalay degmadaasi la wareegay ay fariisin cusub ka samaysteen meelo badan oo ka mida gudaha Balcad iyo duleedka degmadaasi.
R/gaas oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qabsashada Balcad ay xiggi-doonto magaalada Jawhar iyo Marka oo ay hadda gacanta ku hayaan kooxda Al-shabaab.